Masar Iyo Turkigu Waayadan Miyey Isku Soo Dhawaanayaan? – Borama News Network
Masar Iyo Turkigu Waayadan Miyey Isku Soo Dhawaanayaan?
Wargeysyo Carbeed ayaa qoray “ifafaale” muujinaya in uu jiro xidhiidh dhex maraya Turkiga iyo Masar, iyo sidoo kale qoreyaal tilaamay suurtogalminada ah in la gaadhi doono is faham ay dhex mara labada dal mustaqabalka.
Ibrahim Kalin oo ah af-hayeenka madaxtooyada Turkiga ayaa waraysi uu siiyey Telefishan Turkiga laga leeyahay u sheegay in “Masar ka mid tahay dawladaha waaweyn ee Carabta, gobolka iyo dunida ba” waxaanu intaa ku daray “in Turkigu diyaar u yahay inuu ka falceliyo hadii ay Masar muujiso in ay u heelan tahay u hawl galka ajendayaasha togan ee gobolka.”
Turkiga oo beer-laxawsanaya Masar
Wargeyska Ra’y Al-Yoom ee London ka soo baxa ayaa qoray “wararka maalmahan isa soo taraya ee tibaaxaya in Turkigu beer-laxawsanayo Masar iyadoo ay waliba jiraan warar kale oo sheegaya in ay suurto galeen kulamo dhex maray waftiyo ka socda sirdoonka labada dal oo ku heshiiyey in la hakiyo dacaayadaha warbaahinta la isu marinayo, waxay arimahaasi noqon karaan tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhanka kalsooni abuurka iyo sidoo kale in ay gogol xaadh u ahaayeen kulamo diblomaasiyadeed iyo kuwo siyaasadeed oo heer sare ah.”
Sucuudiga ma wuxuu ku dhawaaqay cunaqabateyn ka dhan ah Turkiga?
Wargeysku waxa uu intaa ku daray “beer-laxawgisan Turkigu wuxuu muujinayaa in madaxweynaha dalkaas ee Erdogan iyo kaaliyeyaashiisu ay go’aansadeen in ay muhiim tahay in ay dib u eegaan siyaasadooda oo la dardar geliyo diblomaasiyadda oo la isku dayo in Masar aanay lid ku noqon dalka weliba markaa la eego dardarta dagaalka dhaqaale ee ay isbahaysiga Sucuudiga iyo Imaaraadku ku qaadeen Ankara. Maadaama ay xayiraad ku soo rogeen dhamaan badeecadaha Turkiga ee dalalkooda loo dhoofin jiray iyo sidoo kale dalxiiska Istanbuul, iyadoo duruufo adagi soo food saareen lacagta dalkaas iyo guud ahaan ba dhaqaalaha Turkiga oo ay weliba intaa u dheer tahay culayska xooga leh ee ka haysta dhanka Yurub ama dhanka bariga sida Suuriya, Iran iyo dawladaha Khaliijka.”
Wargeyska Al-Quds Al-Carabi ee London ka soo baxa ayaa isna waxa uu leeyahay “maalin ba maalinta ka dambaysa ayaa waxa soo kordhaya ifafaalaha tilmaamaya in uu jiro xidhiidh dhex maraya Masar iyo Turkiga in kasta oo uu heer hoose taagan yahay oo la rumaysan yahay in aanu weli dhaafsiisnayn sirdoonka labada dal iyo diblomaasiyiin hoose. Laakiin waxay arintaasi tilmaamaysaa in ay suurto gal tahay inuu dhaco isu soo dhawaansho siyaasadeed mustaqbalka oo is faham laga gaadho arimaha qaarkood sida xiisadda Liibiya iyo calaamadaynta xadka badda ee labada dal ka leeyihiin dhanka bariga badda Mediterranean-ka.”
Wargeysku waxa kale oo uu qoray in “xidhiidhka Turkiga iyo Masar ee haatan socdaa uu ku kooban yahay heer diblomaasiyadeed hoose iyo dhanka sirdoonka oo uu bilaabmay markii ay xiisadda Liibiya cakirantay, arintaasina waxay qayb ka ahayd dedaalka heer caalami ah oo lagu doonayey in lagu kala hagoogto Qaahira iyo Ankara oo aanay ku dagaalamin dhulka ku teedsan Sirte ilaa Al-Jafra, iyo sidoo kale isku dayo lagu doonayo in ay labada dal heshiis ka gaadhaan xadka ay ka leeyihiin dhanka badda.”
Al-Quds Al-Carabi wuxuu intaa ku daray “ilaa haatan Turkigu wuxuu shardi ka dhigayaa in uu marka hore ka helo dhanka Masar isbedel siyaasadeed oo dhab ah kaas oo saldhig u noqon kara heshiis qaran oo soo af-jara gacan bidixaynta mucaaradka xukuumadda Masar ku tilmaanto argagixisada, iyo sidoo kale in la joojiyo xadhiga siyaasiyiinta iyo dilka mucaaradka hadii la doonayo in Turkiga iyo nidaamka haatan Masar ka taliyaa isku soo dhawaadaan arintaas oo aan ifafaalaheedu ilaa haatan muuqan.”
Shabakadda Middle East Online ayaa qortay “Turkigu mudaba wuxuu doonayey inay isku soo dhawaadaan Masar oo geed dheer iyo mid gaaban ba wuu u fuulay arintaa, waxaana marag u ah sida uu u debciyey hadalladii kulkululaa ee uu warbaahinta u marin jiray Qaahira ilaa heer uu gaadhay uu si cad u sheego inuu diyaar u yahay iskaashi ay labada dhinac ka yeeshaan arimo door ah oo heer gobol ah.”
Shabakaddu waxay sidoo kale qabtaa in “Masar ay ku dedaashay in ay xoojiso xidhiidhka ay la leedahay Giriigga iyo Qubrus oo sidoo kalena ay dhoola tusyo milatari samayso. Waxaana intaa dheer in ay heshiis ka gaadheen Giriiga sidii loo calaamadin lahaa xuduudda badda ee Masar iyo Giriigga taas oo ah fariin cad oo ku socota Ankara. Sidoo kale waxa ay Masar ku dhaqaaqday talaabo aan hore u dhicin oo ah in maraakiibteeda dagaalku todobaadkii hore ka gudbaan marinka Bosporus si ay uga qayb galaan dhoola tus milatari oo ciidamada badda Ruushku ku soo bandhigayaan badda Madow ee ka baxsan xadka Turkiga, taas oo qudheeduna ahayd fariin istiraatijiyadeed oo xoogan”
Hase yeeshee qoraaga la yidhaa Ismaaciil Baashaa oo maqaal ku qoray wargeyska Carabi 21 ayaa yidhi “fariinta ay sheegayaan taageerayaasha Al-Sisi ee ah in Turkiga loo diray wax macno ah ma laha. Sidoo kale dhoola tusyada milatari ee ciidamada badda Masar kala qayb galeen kuwa Ruushka ee ka dhacay badda Madow ayaa qudhoodu ah boodaalaysi caruureed. Waxaanu la mid yahay uun dhoola tuskii milatari ee Imaaraadku kala qayb galay Giriigga ee ka dhacay badda Mediterreanean-ka, sababtuna waxa weeyi si kasta oo dhoola tuska loogu ekaysiiyo dagaal, xaqiiqadu waxay tahay in aanay noqonayn dagaal lala galayo cid kaa soo horjeeda.”
Waxaanu intaa ku daray “maraakiibta dagaalka Masar ee haatan dhoola tuska milatari kaga qayb galaya bada Madoobi, hadii dagaal dhaco Turkigu u ogolaan maayo in ay ka gudbaan marinada Bosporos iyo Dardanelles oo uma gudbi karaan dhanka badda Madow”.
Waxaanu ku soo gabogabeeyey “dhoola tuska loo bixiyey biriijka saaxiibtinimada ee 2020 hadiiba uu yahay fariin cidi dirayso waa fariin Ruushku dirayo ee maaha mid Masar dirayso. Waxaana xaqiiqa ah in markasta oo Moscow doonayso in ay cadaadis saarto Ankara ay hoosta soo gashato dalalka ay is diidan yihiin Turkiga si ay uga cadhaysiiso.”
Ciidamo Ka Tirsam Maamulka Puntland Oo Xoog Kula Wareegay Xarun Wasaaradeed
Ordogan Oo Bishaaro Cusub U Jeediyay Dalkiisa Iyo Dhoolatus Ay Wada Samaynnayaan Turkiga Iyo Giriigu
Wafti Ka Socda Golaha Dhanka Beelaha Dir Oo Ka Yimid Niarobi Iyo Muqdisho Oo Borama Lagu Soo Dhaweeyay